8 × 30 I-Podcast: Ukukhangela i-ID yokuChukumisa | Ndisuka mac
I-8 × 30 iPodcast: Ukukhangela i-ID yokuChukumisa
Emva kweveki ye #PodcastApple ipati, sibuya nomdla kunakuqala. NgoLwesibini odlulileyo siqale ngesiqendu 30 seli xesha lesibhozo sithetha ngokuthe ngqo nge-ID yesazisi kunye namarhe e-iPhone 8, "X", uHlelo oluKhethekileyo okanye nantoni na eyabizwa nguApple. Umxholo ophambili ngowangoku amarhe malunga nendawo yesenzwa somnwe kwimodeli elandelayo ye-iPhone, Oku kubonakala kubekwe ngasemva kwesixhobo kwaye asikuthandi oku kakhulu, kodwa aziyonto yimbi ngaphandle kwamahemuhemu kunye nokuvuza ngenxa yoko akukho mfuneko yokoyikisa.
Ukongeza kule datha ibalulekileyo yabasebenzisi be-iPhone esinokubona indawo yokutshintsha kweminwe yeminwe, phezolo sithethe ngeenkcukacha zescreen kunye nokubonakala kwe-iPhone entsha ukongeza Nika izimvo kwezinye zezinto zibalaseleyo zale veki emva kweentsuku ezininzi zetheko.
Enye iveki sishiya i #PodcasApple ndivela eMac kubo bonke abo bafuna ukuyimamela, babelane ngayo kwaye kutheni kungenjalo, bonwabele. Ukuba ungomnye wabo bangekabikho Ubhalise kwisitishi seTunes sukulinda ixesha elide kwaye uyenze. Kwaye ukuba uyafuna ungenza okufanayo kwi Umjelo weYouTube ukuze ufumane isaziso ngalo mzuzu siqala ngalo iinkqubo zemiboniso. Unokusilandela nakwiinethiwekhi zentlalo kwaye wabelane ngezimvo zakho, imibuzo okanye iingcebiso nangaliphi na ixesha, ezi zamkelekile liqela lePodcastApple. Khumbula ukuba ungasebenzisa kwakhona hashtag #podcastapple Ukongeza kwamanye amajelo, iinethiwekhi zentlalo kunye nabanye, onokuthi uqhagamshelane nathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-8 × 30 iPodcast: Ukukhangela i-ID yokuChukumisa
I-Apple Music ifumana amalungelo awodwa kuxwebhu lukaClive Davis
Imibhiyozo engakumbi ye-Apple ngoMhla woMhlaba nge-Apple Watch njenge-protagonist